Allgedo.com » 2012 » June » 14
Home » Archive Daily June 14th, 2012 Warbixin iyo mahad-celin la xariirta habsami u socodka howlaha Garoonka Diyaaradaha Degmada Caabudwaaq oo ka timid Cabdiqani Sh. Cali Diini oo ah Guddoomiyaha Ururka SDSI. Jun 14, 2012 Ugu horayn, mahad waxay u sugnaatay Ilaahii suurta galiyay inaan u istaagno dhismaha Garoonka Diyaaradaha ee Caabudwaaq (Abudwak Airport) oo runtii ah halbawlaha nolosha ee deegaanka Waqooyiga Galgaduud.
Deegaanka laga sameeyay Garoonka Diyaaradaha oo ku fadhiyay baaxad dhul oo aad u balaaran ayna ku nool yihiin tiro aad u badan oo dad ah ayaa marka loo fiiriyo Gobalka Galgaduud aan horay u lahayn... Kulan ay yeesheen Gudiga Dhismaha Airporka Caabudwaaq ayaa waxaa ay ku Amaaneen Qurba Joogta ku hawlan Aruurinta Lacagta Airporka degmada Caabudwaaq (sawiro) Jun 14, 2012 Kulan ay yeesheen Gudiga Dhismaha Airporka Caabudwaaq ayaa waxaa ay ku Amaaneen Qurba Joogta ku hawlan Aruurinta Lacagta Airporka degmada Caabudwaaq, waxaana ay dhanka kale ka codsadeen Guud ahaan Qurba joogta oo dhan in ay u istaagaan dhamaystirka Airporka Caabudwaaq (Daawo Sawirada Gudiga iyo Shaqada Garonka oo socota)
Caabudwaaq, Somalia (AOL) – Gudiga Gacanta ku haya dhismaga Garoonka... Kulanka Qorsheynta Xasilinta Soomaaliya oo maanta ka furmay Djibouti (Sawiro) Jun 14, 2012 Jabuuti, Jabuuti (AOL) – Waxaa maanta magaalada Djibouti, Hotelka Kempinsk ka furmay kulanka Qorsheynta Xasilinta Soomaaliya oohalkaas ka socon doono muddo 4-cisho ah. Kulankan waxaa soo qabanqaabisay Dowladda Federaalka Soomaaliya gaar ahaana Guddiga u qaabilsan Xasilinta iyo dib u heshiisiinta (National Steering Comittee). Barnaamijka ayaa waxaa fududeeyey Hay’adda mucaawinadda Mareykanka... Xaalado nololxumo iyo Caafimaad daro ka taagan deegaano hoostaga degmada Garbahaarey ee Gobolka Gedo. Jun 14, 2012 Baardheere, Somalia (AOL) – Xaalado isugu jira Cuni yari iyo weliba caafimaad daro ayaa waxaa laga soo waramayaa in ay ka taagan yihiin deegaano ka tirsan degmada Garbahaarey ee Gobolka Gedo, iyadoo arimahaasina maalmahii u dambeeyey ay saameyn adag oo dhinaca nolosha ah ay ku yeelatey Boqolaal Qoys oo u badan xoolo dhaqato reer guuraa ah oo iyagu labadii sano ee la soo dhaafey la daala dhacayey... Radio Allgedo/ Waraysiyo